Yakanyungudika Oxygen Series Vagadziri & Vatengesi - China Yanyungudika Oxygen Series Factory
Pamhepo Dissolve Oxygen Meter T4046
Maindasitiri epamhepo akanyungudika okisijeni mita iri yepamhepo yemhando yekutarisa uye yekudzora chishandiso ine microprocessor. Chishandiso chakashongedzerwa ne fluorescent yakanyungudika maseru eoksijeni. Iyo online yakanyungudika okisijeni mita ndeye yakanyanya kungwara online inoenderera yekutarisa. Iyo inogona kuve yakagadzirirwa ne fluorescent ma electrode kuti otomatiki akwanise akasiyana akasiyana ppm kuyerwa. Icho chishandiso chakakosha chekutarisa mweya weokisijeni mune zvinwiwa mukuchengetedza kwezvakatipoteredza zvine chekuita nemaindasitiri.
Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Chlorophyll Sensor, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Kufambisa TDS Sensor, Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Ph Sensor Electrode,